Work From Home နေရပေမဲ့ Active ဖြစ်နေစေဖို့ -
အိမ်မှာနေပြီးအလုပ်လုပ်ရသူတွေအများအပြားရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်တွေကို ဘယ်လိုမျိုးအိမ်ကနေပြီး ပိုမို Productive ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကို မျှဝေပေးပါမယ်။
ပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ သင်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကိုနေ့တိုင်းသတ်မှတ်ပါ။သင်၏လုပ်ငန်းများကို ဦး စားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်သတ်မှတ်ပါ။ ယခုအပတ်မှာဘယ်အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်? ယခုအပတ်တွင်ဘာလုပ်ဖို့ အရင်လိုအပ်သလဲ ? တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ကုန်ဆုံးချိန်တွင်ဘာတွေပြီးဖို့လိုအပ်မလဲ စတာတွေကိုသိပါ။ အဲအချက်တွေကို အာရုံစူးစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ Support ပေးနိုင်မဲ့ Workspace တစ်ခုဖန်တီးပါ။အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ အများစုဟာ အချိန်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမှန်းမသိခြင်းနဲ့ အလုပ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေသည်ဖြစ်ပါစေ အလုပ်စားပွဲမှာတော့အလုပ်နဲ့ပက်သက်တာပဲရှိနေသင့်ပါတယ်။အခြားအရာတွေကို Focus လုပ်မိတဲ့အခါ အလုပ်အပေါ်အာရုံမရပဲ အခြားအရာတွေကိုပဲလုပ်နေမိခြင်းမဖြစ်အောင် အလုပ်အပေါ်မှာပဲအာရုံထားနိုင်မဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ Workspace တစ်ခုဖန်တီးပါ။
အိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေရတာကို မိသားစုကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်တတ်လို့ အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ပြီး မိသားစုအားအသိပေးထားသင့်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အိမ်မှာရှိနေလို့ စကားပြောလို့ရတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီး စကားလာပြောတာမျိုး ဂိမ်းကစားဖို့ခေါ်တာမျိူးစတဲ့ အရာတွေကသင့်အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေမှာပါ။
ယခုအချိန်မှာ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ရရှိမဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုသာတွေးပြီး အလုပ်အပေါ်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Saturday September 26th, 2020/ Blog/0Comment